News – Gaming Noodle
ဘီကီနီဝတ်ပြီး ရေစိမ်ပြတဲ့ Live Stream တွေကို အသိအမှတ်ပြုလို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ Twitch
ဘီကီနီဝတ်ပြီး ရေစိမ်ပြတဲ့ Live Stream တွေကို အသိအမှတ်ပြုလို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ Twitch လက်ရှိ ဂိမ်း streaming လောကရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးပလက်ဖောင်းအဖြစ် ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေနိုင်တာကတော့ Twitch ပါ။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးမီကတော့ Twitch ပေါ်မှာ ဂိမ်းနဲ့ သက်ဆိုင်မှု လုံးဝမရှိတဲ့ stream အမျိုးအစားသစ်တစ်ခု ခေတ်စားလာခဲ့ပြီး ယင်းကြောင့်ပဲ လူအများဟာ Twitch ကို ဝေဖန်မှုများ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ဒီ stream အမျိုးအစားသစ်ရဲ့ နာမည်ကို Pools, Hot Tubs and Beaches လို့ Twitch က အမည်ပေးသတ်မှတ်ထားပြီး ဘီကီနီဝတ် အမျိုးသမီးငယ်များရဲ့ ရေကန်ငယ်လေးများအတွင်း ရေစိမ်ပြတဲ့ stream ဗီဒီယိုအမြောက်အများ ပါဝင်ပါတယ်။ မူလက …
ဘီကီနီဝတ်ပြီး ရေစိမ်ပြတဲ့ Live Stream တွေကို အသိအမှတ်ပြုလို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ Twitch Read More »
အသင်းဟောင်းကို တရားပြန်စွဲခဲ့ကြတဲ့ Dota2 ကစားသမားများ
LeaveaComment	/ News / By Ko Boo
“အသင်းဟောင်းကို တရားပြန်စွဲခဲ့ကြတဲ့ Dota2 ကစားသမားများ” [Unicode] Dota2ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားများဖြစ်ကြတဲ့ Tavo နဲ့ hFn တို့ဟာ ယင်းတို့ ဝင်ရောက်ကစားခဲ့ကြတဲ့ အသင်းဟောင်း paiN Gaming ကို ပြိုင်ပွဲဆုကြေးကိစ္စများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားစွဲဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းများကို ဘရာဇီးဝက်ဘ်ပေါ်တယ်လ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Universo Online မှာ မကြာသေးမီက ဖော်ပြခဲ့ပြီး စွဲဆိုချက်များအတွင်းမှာတော့ paiN Gaming ဟာ Tavo နဲ့ hFn တို့ ရရန်ရှိတဲ့ ပြိုင်ပွဲဆုကြေးငွေများကို မပေးပဲ အချိန်ဆွဲနေခဲ့သလို ကစားသမားစာချုပ်များမှာလည်း ဥပဒေနဲ့မညီညွှတ်တဲ့အချက်အလက်များ ပါဝင်နေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Tavo နဲ့ hFn တို့ဟာ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလတည်းက paiN Gaming ကို တရားစွဲဖို့ တင်သွင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး …
အသင်းဟောင်းကို တရားပြန်စွဲခဲ့ကြတဲ့ Dota2 ကစားသမားများ Read More »
မြန်မာအသင်းပါဝင်တဲ့ WESG 2019 APAC Finals ကျင်းပမယ့်အချိန်နဲ့နေရာ ပြောင်းလဲ”
LeaveaComment	/ News / By Kyi Tha Mg
Unicode WESG ရဲ့ တာဝန်ရှိသူများဟာ WESG 2019 Asia-Pacific (APAC) Finals ပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန် နောက်ဆုတ်ကြောင်းနဲ့ နေရာရွှေ့ပြောင်းကြောင်း ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများကို မကြာသေးမီက အီးမေးလ်ပို့အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ ယင်းအီးမေးလ်အရ ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ကနေ ၅ ရက်နေ့အထိ မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ ကျင်းပမယ့်အစား ၂၀၂၀ ဖော်ဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ကနေ ၁၈ ရက်နေ့အထိ Macau မှာ ပြောင်းလဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ WESG ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်အတွင်းမှာတော့ ပွဲစီစဉ်သူများဟာ မူလသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ ဒေသတွင်းအထောက်အပံ့နဲ့ လိုအပ်ချက်များကို အချိန်မီရှာဖို့ ခက်ခဲခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။ အဆင်မပြေမှုအတွက် အသင်းများကို တောင်းပန်ထားသလို လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ အကူအညီများ ပေးသွားမယ်လို့လည်း ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့် WESG 2019 …
မြန်မာအသင်းပါဝင်တဲ့ WESG 2019 APAC Finals ကျင်းပမယ့်အချိန်နဲ့နေရာ ပြောင်းလဲ” Read More »
ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ Dota2 ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲသွားတဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်အသင်း
LeaveaComment	/ LOCAL, News / By Kyi Tha Mg
Unicode ထိုင်း၊ မြန်မာနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ကိုယ်စားပြုအသင်းတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Dota2 University Champion (DUC) တတိယမြောက်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာကိုယ်စားပြုအသင်းဖြစ်တဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ် (Dagon University) Dota2 အသင်းက ချန်ပီယံဆုအဖြစ် ဗိုလ်စွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ DUC ပြိုင်ပွဲဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Common Ground အဖွဲ့အစည်းမှ နှစ်စဉ်ဦးစီးကျင်းပနေကျ တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ Dota2 ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ။ ယခင်နှစ် DUC ၂၀၁၈ ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာအသင်းတွေ စတင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (YU) နဲ့ သန်လျှင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (TTU) တို့ဟာ နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် ဘန်ကောက်မြို့မှာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံး Grand Final ကိုတော့ တက်ရောက်ခွင့် မရခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီနှစ်မှာတော့ DUC III အတွက် …
ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ Dota2 ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲသွားတဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်အသင်း Read More »
PUBG Mobile ေဆာ့ျပမယ့္ Girls’ Generation အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
Zawgyi ေကေပါ့ပ္လို႔ ေျပာလုိက္ရင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕စိတ္ထဲေရာက္လာမယ့္အထဲမွာ Veteran အဖြဲ႕တစ္ခု လုိ႔ဆုိႏုိင္ၿပီး အခုထိလူၾကိဳက္မ်ားေနဆဲ Girls’ Generation လည္းပါဝင္မွာပါ။ GG အဖြဲ႕ဝင္ေတြျဖစ္တဲ့ Sunny နဲ႔ Taeyeon တုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြထဲက Gaming စြမ္းရည္ကို ျပသဖို႔အတြက္ လာမယ့္ S.M. Super League ရဲ႕ PUBG Mobile ပြဲစဥ္မွာ ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျပမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ S.M Super League ဆုိတာကေတာ့ GG ရဲ႕မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ S.M. Entertainment မွ စပြန္ဆာေပးထားတဲ့ Esports League တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္းမွာ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ League of Legends ဂိမ္းနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္က်င္းပခဲ့တာ အခုဆုိရင္ …
PUBG Mobile ေဆာ့ျပမယ့္ Girls’ Generation အဖြဲ႕ဝင္မ်ား Read More »
Dark Souls ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ေပါင္းၿပီး ဗီဒီယုိဂိမ္းမိတ္ဆက္လာတဲ့ Game of Thrones ဖခင္ႀကီး GRRM
Zawgyi ယခုႏွစ္ E3 ျပပြဲကေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားစရာအျပည့္ပါပဲ။ Keanu Reeves ပါဝင္တဲ့ Cyberpunk 2077 ဂိမ္းရဲ႕ မိတ္ဆက္ Teaser ကိုျမင္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုတစ္ခါ Game of Thrones စီးရီးရဲ႕ ဖန္တီးရွင္ George R.R Martin ဟာ Dark Souls ဂိမ္းေတြကို ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ Fromsoftware နဲ႔ေပါင္းၿပီး ဂိမ္းအသစ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္လာခဲ့ပါၿပီ။ Dark Souls ရဲ႕ဖန္တီးရွင္ Hidetaka Miyazaki နဲ႔ ဘက္ဆဲလားစာေရးဆရာႀကီး G R.R. Martin တုိ႔ ပူးေပါင္းထားတဲ့ ဗီဒီယုိဂိမ္းရဲ႕အမည္ကေတာ့ “Elden Ring” ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး ေပါင္းစပ္အၾကံဥာဏ္ထုတ္ထားတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ကမာၻထဲမွာ ေဆာ့ကစားရမယ့္ ဂိမ္းတစ္ခုပါ။ Fromsoftware ဟာ …
Dark Souls ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ေပါင္းၿပီး ဗီဒီယုိဂိမ္းမိတ္ဆက္လာတဲ့ Game of Thrones ဖခင္ႀကီး GRRM Read More »